KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mongolian Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Owusɔre—Anidaso a Ɛwɔ Hɔ Ma Awufo
Owusɔre ho bɔhyɛ a ɛwɔ Bible mu no, wugye di anaa? * Sɛ yɛn ho nnipa a wɔawuwu resan aba nkwa mu ama yɛne wɔn atena a, anka hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ anigye. Nanso dɛn na ɛkyerɛ sɛ biribi saa betumi asi? Momma yɛnhwɛ nea Yesu Kristo asomafo no yɛe na ama yɛanya asɛmmisa no ho mmuae.
Ná asomafo no gye di paa sɛ owusɔre bɛba. Dɛn na ɛmaa wogye dii? Ma yɛnka nneɛma abien pɛ ho asɛm. Nea edi kan, na wɔn gyidi no wɔ nnyinaso, efisɛ na wɔanyan Yesu ankasa afi awufo mu. Yesu nyan fii awufo mu no, asomafo no huu no; afei oyii ne ho adi kyerɛɛ “anuanom bɛboro ahanum bere koro mu.” (1 Korintofo 15:6) Afei sɛnea Nsɛmpa anan no kyerɛ no, nnipa bebree gyee Yesu wusɔre no dii na wɔannye ho akyinnye.—Mateo 27:62–28:20; Marko 16:1-8; Luka 24:1-53; Yohane 20:1–21:25.
Nea ɛtɔ so abien no, anyɛ yiye koraa no, asomafo no de wɔn ani hui sɛ Yesu anyan nnipa basaa afi awufo mu. Onyanee obi wɔ Nain, onyanee obi nso wɔ Kapernaum, ɛnna onyanee obi wɔ Betania. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Yohane 11:1-44) Nea Yesu nyanee no wɔ Betania no, yɛaka ho asɛm dedaw wɔ Ɔwɛn-Aban yi mu; abusua a wɔn ho nipa wui no, na Yesu bɛn wɔn paa. Ma yɛnhwehwɛ saa asɛm no mu nkɔ akyiri kakra.
“Wo nua no bɛsɔre.” Saa na Yesu ka kyerɛɛ Marta a na ne nuabarima Lasaro awu nnanan no. Saa bere no, Marta ante Yesu asɛm no ase, enti ɔkae sɛ: “Minim sɛ . . . ɔbɛsɔre.” Nanso na ɛyɛ no sɛ daakye na ne nua no bɛsɔre. Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, “Mene owusɔre ne nkwa,” na afei onyanee ne nua no fii awufo mu. Wo de, hwɛ sɛnea Marta ho bedwiriw no afa!—Yohane 11:23-25.
Bere a Lasaro wuu nnanan no, ɛhe na ɔkɔe? Lasaro sɔree no, wanka biribiara a ɛkyerɛ sɛ nnanan a owui no, ɔkɔɔ baabi. Ná ɔkra a enwu biara nhyɛ Lasaro mu a efii ne mu kɔɔ soro. Yesu nyanee Lasaro no, ɛnyɛ sɛ na Lasaro wɔ soro regye n’ani wɔ Onyankopɔn nkyɛn na ɔkɔtwee no fii hɔ baa asase so. Ɛnde nnanan a Lasaro wui no, ɛhe na na ɔwɔ? Asɛm no ara ne sɛ, na wada wɔ adamoa mu.—Ɔsɛnkafo 9:5, 10.
Hyɛ no nsow sɛ Yesu kae sɛ obi wu a, wobetumi asan anyan no te sɛ obi a wada. Ɔkae sɛ: “‘Yɛn adamfo Lasaro ada, na merekɔ hɔ akonyan no.’ Ɛnna asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Awurade, sɛ wada de a, ɛnde ne ho bɛyɛ no den.’ Yesu de, na ne wu ho asɛm na ɔreka. Nanso wosusuwii sɛ ɔreka nna ho asɛm. Enti afei de, Yesu ka kyerɛɛ wɔn pen sɛ: ‘Lasaro awu.’” (Yohane 11:11-14) Yesu san de Lasaro nkwa maa no bio de no maa n’abusuafo. Akyɛde kɛse paa na Yesu de maa saa abusua no!
Yesu wɔ asase so no, nkurɔfo a onyanee wɔn fii awufo mu no kyerɛ sɛ daakye sɛ ɔbɛyɛ Onyankopɔn Ahenni no so hene a, ɔbɛyɛ nea ɛkyɛn saa koraa. * Sɛ Yesu tena soro di asase so hene a, nnipa a wɔadeda wɔ adesamma adamoa mu nyinaa no, obenyan wɔn aba nkwa mu bio. Ɛno nti na ɔkae sɛ: “Mene owusɔre” no. Wuhu sɛ wo ho nnipa a wɔawuwu asɔre aba nkwa mu bio a, hwɛ sɛnea w’ani begye! Awufo a wɔbɛsɔre aba no nso ɛ? Wɔn nso ani begye papaapa!—Luka 8:56.
Wuhu sɛ wo ho nnipa a wɔawuwu asɔre aba nkwa mu bio a, hwɛ sɛnea w’ani begye!
GYIDI BƐMA YƐANYA DAA NKWA
Yesu ka kyerɛɛ Marta sɛ: “Obiara a onya me mu gyidi no, sɛ owu mpo a, ɔbɛba nkwa mu; na obiara a ɔte ase a onya me mu gyidi no renwu da.” (Yohane 11:25, 26) Wɔn a Yesu benyan wɔn wɔ ne mfirihyia apem ahenni no mu no, sɛ wonya ne mu gyidi a edi mu nko ara de a, wobetumi atena ase daa.
“Obiara a onya me mu gyidi no, sɛ owu mpo a, ɔbɛba nkwa mu.”—Yohane 11:25
Bere a Yesu kaa saa nsɛm a ɛka koma no wiei no, obisaa Marta sɛ: “‘Wugye eyi di?’ Ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Yiw, Awurade; migye di sɛ wone Kristo, Onyankopɔn Ba . . . no.’” (Yohane 11:26, 27) Wo nso ɛ? Wopɛ sɛ wunya owusɔre no mu anidaso te sɛ Marta? Ade a edi kan a ehia sɛ woyɛ ne sɛ wubesua ade ahu nea Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama adesamma. (Yohane 17:3; 1 Timoteo 2:4) Saa adesua no bɛma woanya gyidi. Adɛn nti na womma Yehowa Adansefo mmɛkyerɛ wo nea Bible kyerɛkyerɛ wɔ saa asɛm yi ho? Wɔn ani begye ho sɛ wɔne wo bɛbɔ owusɔre anidaso a ɛyɛ anigye no ho nkɔmmɔ. ▪
^ nky. 2 Hwɛ asɛm a ɛwɔ nhoma yi kratafa 6 a wɔato din “Nnipa Wu a na Ɛnsae!”
^ nky. 9 Owusɔre ho bɔhyɛ a ɛwɔ Bible mu no, wopɛ ho nsɛm pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 7. Yehowa Adansefo na wotintimii. Wubehu nso wɔ www.jw.org.